I-Dar El Mahdia-Kufuphi elunxwemeni kwaye yanamhlanje kakhulu - I-Airbnb
I-Dar El Mahdia-Kufuphi elunxwemeni kwaye yanamhlanje kakhulu
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMokhtar
Indawo yokuhlala intsha, ukususela ngo-2015. Imalunga neemitha ezingama-350 kuphela ukusuka elunxwemeni olunesanti. Indawo isembindini kwaye unokukhawuleza ufike kwiindawo zokutyela, ivenkile yokubhaka, iikhefi, iivenkile ezinkulu, ikliniki, iziko lezonyango, ipaki ye-aqua nokunye okuninzi ...
Indawo yokuhlala iyagcinwa kwaye icocwe yi-concierge kwaye ikhuselwe ziikhamera zokujonga.
Ukuhlala okumangalisayo kwindlu enesitayile esinesitayile. Unombono wolwandle kwaye i-terrace ijonge indawo yephuli yendawo yokuhlala.
Iifestile ezakhelwe ngaphakathi ezityibilikayo zikukhusela emoyeni nasemvuleni kwimozulu embi kwaye usenokonwabela iterrace efakwe kakuhle. Ukongezelela, uxolo olupheleleyo luqinisekisiwe.
Onke amagumbi axhotyiswe ngobushushu obuphakathi. Igumbi ngalinye (igumbi lokuhlala kunye namagumbi okulala ama-2) linesimo somoya.
Isitovu sombane, i-oven, i-microwave ene-grill function, ifriji enendawo yokupholisa, i-extractor hood, i-coffee maker, i-toaster ye-sandwich, i-kettle, ukupheka okupheleleyo kunye nempahla yokutya yabantu abayi-12, i-cutlery yabantu abayi-6.
Oomatrasi bezone ezisi-7 zaseYurophu, izikhuseli zoomatrasi, iitopu zoomatrasi, iiduvethi kunye nemiqamelo ezingenakwaleli, ibhedi yokuhamba, isitulo esiphakamileyo, umatshini wokuhlamba, isixhobo sokomisa iinwele.
Umoya womoya kunye nomsebenzi wokufudumeza, ukufudumeza okuphakathi kwigumbi ngalinye, ukucima umlilo
I-SAT-TV, i-ayina, ibhodi yoku-ayina, ihashe lempahla, isicoci sevacuum kunye neemveliso ezahlukeneyo zokucoca
Kubalulekile: Indlu kufuneka icocwe ziindwendwe kwaye ishiywe njengoko bekunjalo ekungeneni. Ukuba unqwenela, sinokwenza ukucoca nge-€ 20 (oku kuya kwenziwa ngumcoci).
Indawo isembindini kwaye ixakeke kakhulu. Ngokuthe ngqo kwindawo yabakhenkethi, kufutshane nesixeko kunye ne-200m ukusuka kwi-Aquapark Mahdia.
Iindawo zokutyela, imivalo, ikofu, iinkonzo zokuhambisa, iipaki, iindawo ezinomtsalane, iiklabhu zasebusuku, iihotele, iyunivesiti, ikliniki, ikhemesti, iziko lezonyango kunye neendawo zokuthenga zonke zikumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Mokhtar
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ndingafumaneka nge-WhatsApp kwaye ndiphendule ngokukhawuleza. Abazali bam nabo baya kufumaneka xa kufuneka uncedo, ngefowuni okanye ngokobuqu. Abazali bam banohambo lwemizuzu engama-45 ukuya kwigumbi lokuhlala.
PS: Ngaba ixabiso liphezulu kakhulu kuwe? Wamkelekile ukuba undibhalele kwaye undenzele unikezelo lwekhawuntara! Ndivuleleke kwiingxoxo...
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, ndingafumaneka nge-WhatsApp kwaye ndiphendule ngokukhawuleza. Abazali bam nabo baya kufumaneka xa kufuneka uncedo, ngefowuni okanye ngokobuqu. Abaza…
Iilwimi: العربية, English, Français, Deutsch
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hiboun